Madaxweyne Farmaajo oo ka degay Addis Ababa iyo Abiy Ahmed oo soo dhoweeyay + sawirro | Wardoon
Home Somali News Madaxweyne Farmaajo oo ka degay Addis Ababa iyo Abiy Ahmed oo soo...
Madaxweyne Farmaajo oo ka degay Addis Ababa iyo Abiy Ahmed oo soo dhoweeyay + sawirro
Wafdiga madaxweyne Farmaajo oo ay kamid yihiin Wasiiru dowlaha Wasaarada arrimaha dibadda C/qaadir Axmed Khayr iyo La Taliyayaashiisa, ayaa loo galbiyay madaxtooyada dowladda Itoobiya oo ay kulamo kula yeelanayaan Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed.
Madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha la socda Addis Ababa Kusimaha Taliyaha Nabadsugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasoo u gogol xaaray safarka, iyadoo Fahad uu sidoo kale madaxweynaha uga horeeyay safarkiisii dalka Qadar.
Madaxweyne Farmaajo iyo Abiye Axmed ayaa kulan horudhac ah ku yeeshan qeybta VIP ee garoonka diyaaradaha Bole, waxaa ay yeelan doonaan kulan kale oo labo geesood ah oo looga hadlayo xoojinta xiriirka labada dal, iskaashiga iyo is dhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo amniga dalalka dhaca Geeska Afrika.
Kenya ayaa il gaar ah ku heysa waxa ka soo baxa kulankan cusub ee maanta dhexmaraya Abiye iyo Farmaajo, waxaana suura gal ah in kulankooda uu qeyb ka noqdo madaxweynaha dalka Eritrea Isias Afwerki.
Previous articleDAAWO:-Cadde Gaabow” Canshuurta Waa la Joojinaa’ Dadka Muqdishana waxa ay ka tashan doonaan Aayahooda”
Next articleMadaxweyne Farmaajo ” Argagaxisada Way daciifeen Tabar ma Lahan” + COD
Madaxwaynaha Amxaarada oo ku baaqay in shacabka hubka qaataan
Sharciga Batroolka oo Ansixiyay+VIDEO